Ciidamada DKMG ah oo la sheegay in ay u ruqaansadeen Baardheere – SBC
Ciidamada DKMG ah oo la sheegay in ay u ruqaansadeen Baardheere
Wararka laga helayo deegaano ku yaala gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada Dowlada KMG ah ee ku sugnaa deegaano ka agdhow degmada Fax fax dhuun ee Gobolkaasi ay u soo ruqaansadeen dhanka degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamada DKMG ah oo ay garabsiinayaan kuwa Kenya ay ku sii jeedaan Baardheere iyagoona iminka ku sugan sida ilo wareedyo ay xaqiijinayaan deegaan lagu magacaabo Tarako oo ku yaala duleedka Baardheere .
Waxaa sidoo kale la soo sheegayaa in ay jiraan isku dhacyo deegaanada qaar ee gobolkaasi ku dhexmaray ciidamadan u ruqaansaday dhanka Baardheere iyo xoogaga xarakada Alshabaab kuwaasi oo aan la xaqiijin Karin waxyaabihii ka dhashay,.
Saraakiisha horkacaysa ciidamada DKMG ah qaar kood oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in socdaalkan uu yahay mid ay ku doonayaan in ay ku hantaan gacan ku heynta degmada Baardheere ayna dhowaan qaban doonaan sida uu hadalka u dhigeene.
Dhinaca kale Afhayeen u hadlay dhanka Xarakada Alshabaab eek u sugan Baardheere aya asheegay in ay iska difaacayaan ciidamada ku soo fool leh ayna xarakada Shabaab ee Gobolka gedo diyaar u tahay la dagaalanka wax uu ugu yeeray Cadowga sida uu hadalka u dhigaye.
Sidoo kale Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa xaqiijinaya in diyaarado joog hoose ku duulaya lagu arkay deegaano ku yaala duleedka Fax faxdhuun kuwaasi oo la filayo in ay qeyb ka yihiin u ruqaansiga ciidamada ay u ruqaansadeen dhanka Baardheer.